बहु समारोह टर्च, Multifunctional टर्च-एफएस-1001 - चीन Ksdoing कं, लिमिटेड
बहु समारोह ग्लो Orb
Multifunction ग्लो सीटी
मिनी Rotating माछा हाते rechargeable ब्याट्री प्रशंसक
मिनी हाते rechargeable ब्याट्री प्रशंसक
मिनी टेनिस र्याकेट हाते rechargeable ब्याट्री प्रशंसक
बहु समारोह टर्च, Multifunctional टर्च-एफएस-1001
यो उत्पादन तपाईँले कहिल्यै पूरा हुनेछ मात्र टर्च छ। यो परम्परागत flashlights र पूर्ण नयाँ र विशेष कुरा तपाईंले यसलाई प्रेम गर्नुपर्छ !! सबै कार्यहरु जोडती! 300 लुमेन स्पटलाइट (उच्च-स्ट्रोब कम)6नेतृत्व कार्य लाइट,6नेतृत्व यूवी / काला लाइट
उत्पादन के हो?
यो उत्पादन तपाईँले कहिल्यै पूरा हुनेछ मात्र टर्च छ। यो परम्परागत flashlights र पूर्ण नयाँ र विशेष कुरा तपाईंले यसलाई प्रेम गर्नुपर्छ !! सबै कार्यहरु जोडती!
300 लुमेन स्पटलाइट (उच्च-स्ट्रोब कम)
6 नेतृत्व यूवी / काला हल्का
रातो लेन्स फिल्टर
Reusable ग्लो छडी
एएए ब्याट्री प्याक
को reusable संग एल ई डी कवर छडी चमक।3सेकेन्ड लागि एल ई डी खोल्नुहोस्। तपाईं बस चमक छडी चार्ज। अब तपाईंको प्रकाश मा चमक छडी प्रयोग गर्न र आफ्नो ब्याट्री बचत गर्नुहोस्।
फ्ल्यासलाइट चक्र आफैं कसरी?
प्रेस र बटन "मा" सम्म रोशनी आखा भ्किमभ्किम गर्नु पकड। उत्पादन अब ऊर्जा बचत चक्र मा काम गरिरहेको छ। अब तपाईं आफ्नो ब्याट्रीहरू नगरेर एक आभा छडी रोशनी कायम राख्न सक्छौं।
THE REUSABLE GLOW छडी कसरी काम गर्छ?
भित्र reusable आभा छडी स्ट्रोनटियम aluminate को विशाल क्रिस्टल छन्। यो छ brightest, तेज चार्ज, र सबैभन्दा लामो आभा-मा-द-गाढा बजार मा चमकिलो। तपाईं छत मा तर स्टेरयड मा लीन अँध्यारो तारा मा चमक जस्तै विचार गर्नुहोस्।
हाम्रो GLOW-इन-द-गाढा अतः उज्ज्वल बनाउँछ?
परम्परागत आभा-मा-द-गाढा एक पाउडर मा आउछ, चार्ज गर्न प्रकाश अवशोषित कि सानो स्पंज लाखौं रूपमा पाउडर को लाग्छ। पूर्ण चार्ज भएपछि प्रत्येक व्यक्तिगत कण एक कम-स्तर आभा emits सम्म यो ऊर्जा बाहिर चल्छ। किन कणहरु त सानो प्रकाश को मात्रा तिनीहरूले पकड गर्न सक्छन् र न्यूनतम छ फेंकना किनभने अन्धकारमा परम्परागत आभा छैन भनेर उज्ज्वल छ यो छ। यो उत्पादनको चमक क्रिस्टल विशाल छन् जबकि, आफ्नो विशाल कण आकार तिनीहरूलाई थप प्रकाश अवशोषित र अब को लागि थप प्रकाश फेंकना गर्न अनुमति दिन्छ। को क्रिस्टल आफ्नो आँखा तिनीहरूलाई उज्जवल रूपमा बुझ्ने त्यसैले ठूलो भएकोले उल्लेख छैन। तिनीहरूले विशाल प्रकाश स्पंज जस्तै हो!
यूवी प्रकाश किन?
अन्धकारमा नियमित टर्च खोल्दै आफ्नो रात दृष्टि नष्ट गर्न सक्नुहुन्छ वा आफ्नो स्थान अनावश्यक ध्यान आकर्षित, त्यसैले हामी यो टर्च कालो रोशनी समावेश गरेर एक चुपके समारोह दिनुभयो। तपाईंको रात दृष्टि बचाउन कालो रोशनी प्रयोग वा केवल आफ्नो माछा मार्ने यात्रा मा माछा spook गर्न चाहँदैनन्। तपाईं पनि बिच्छू, पाल्तु जनावर दाग, सुरक्षा चिह्नों, र थप पत्ता लगाउन उत्पादन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने यो हाम्रो क्रिस्टल चार्ज छैन हामी रातो प्रकाश प्रयोग गर्नुभएन।
दुइ बैटरी पैक विकल्पहरु किन?
3 एएए ब्याट्री (वैकल्पिक) र 1 यूएसबी rechargeable लिथियम आयन ब्याट्री: यो टर्च सबै लचीलापन र विश्वसनीयता त हामी प्रयोगकर्ताहरू दुई फरक ब्याट्री पैक दे रहे बारेमा छ।
अलग गर्न सकिने लाल LENS फिल्टर?
रातो लेन्स फिल्टर सुविधाजनक आफ्नो टर्च तल मा स्थित छ जो प्रयोग गर्नुहोस्।
अघिल्लो: Multifunction ग्लो सीटी
अर्को: मिनी समायोज्य क्लिप-मा USB- एफएस-2003Ub
परिवर्तनयोग्य हल्का र टिकाऊ मशाल
दोहोरो Chargebale टर्च
आपतकालीन उपकरण टर्च
आपतकालीन मशाल लाइट
फ्लैश Led मशाल
Flashlights अनि Torches
हात ह्यान्डल एलईडी टर्च
Handhheld एलईडी टर्च
उच्च चमक टर्च
उच्च शक्ति एलईडी टर्च
नेतृत्व डाइभिङ मशाल
एलईडी टर्च मशाल
Led rechargeable टर्च
नेतृत्व बलियो हल्का टर्च
नेतृत्व मशाल टर्च
Led मशाल प्रकाश टर्च
Led मशाल rechargeable
सबैभन्दा शक्तिशाली एलईडी टर्च मशाल
बहु समारोह कार मशाल
बहु समारोह फ्लैश Led मशाल
बहु समारोह Flashlights
बहु समारोह एलईडी टर्च
बहु समारोह Led मशाल
बहु कार्यात्मक एलईडी टर्च मशाल
बहु उद्देश्य मशाल लाइट
बहु उपकरण टर्च
बहु उपकरण Led मशाल लाइट
बहु उपकरण मशाल
Multifunction कैम्पिंग लालटेन टर्च
बाहिरी बहु समारोह मशाल
बाहिरी Multifunctional मशाल
पोर्टेबल डायनेमो rechargeable मशाल
पोर्टेबल बहु समारोह टर्च
पोर्टेबल Usb टर्च
Rechargable मशाल लाइट
rechargeable Led मशाल
rechargeable बहु उद्देश्य मशाल लाइट
Rechargeable मशाल लाइट एलईडी टर्च
rechargeable मशाल लाइट मूल्य
बलियो हल्का टर्च
उपकरण फ्लैश Led मशाल
मशाल लाइट एलईडी टर्च
Usb rechargeable मशाल लाइट
पनरोक Led मशाल rechargeable
ठेगाना:5/ एफ, तपाईं शांग मेई भवन, YanTian, ​​Fenggang, Dongguan, प्रांत, चीन